Ihowuliseyili Ihowuliseyili Ihowuliseyili uyilo polyester oyimfakamfele kwigumbi lokuhlala, China Ihowuliseyili Igqabi uyilo polyester oyimfakamfele kwigumbi lokuhlala Abavelisi, abaXhasi, Umzi mveliso - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Inani Model: 8685
● Izinto eziGqwesileyo: IBanga leSemi Sheer Fabric enoMgangatho oMhle wokuthunga, oCocekileyo kwaye othambileyo kwiTouch.
● UKUYILA OKUQHELEKILEYO: Imisonto ecekethekileyo enobuhle obugqwesileyo kunye nokuhomba okucekeceke kodwa okuthandekayo kongeza isitayile nobuhle kwigumbi lakho, yenza imbonakalo entle ethambileyo neyala maxesha kwiifestile zakho.
● UKUHLUTSHWA KOKUKHANYA: La amalengalenga okuhombisa amagqabi anika ukukhanya, ukuthandana kunye nokujonga umoya kwigumbi ngokuvumela ukukhanya kwelanga kuthambeke phakathi ngelixa kubonelela ngasese.
● UKUSEBENZA KAKUHLE: Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala, efanelekileyo kwigumbi lokulala, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, igumbi labantwana, igumbi labantwana, igumbi labantwana, iofisi, ihotele okanye enye indawo yoluntu.
● UKUFAKA KANYE NOKUNonophela: I-3 "ipokotho yentonga kulula ukuxhoma ngentonga esemgangathweni okanye yokuhombisa. Umatshini onokuhlanjwa ngamanzi abandayo, umjikelo onobulali, owomileyo owomileyo. Intsimbi epholileyo xa kufuneka.
Igama lemveliso Uyilo lwefashoni yeflash polyester yokuhombisa kwigumbi lokuhlala